Kulamo caadi ah Qarsoodina lagu sheegey Oo Dhexmaray Wasiirro maamulka Somaliland Iyo dalka Soomaalia ah. – Xeernews24
Kulamo caadi ah Qarsoodina lagu sheegey Oo Dhexmaray Wasiirro maamulka Somaliland Iyo dalka Soomaalia ah.
1. Februar 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Kulamo Qarsoodi Ah Oo Dhexmaray Wasiirro maamulka Somaliland Iyo dalka Soomaalia Ah
Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo Sayniska Somaliland Prof Yaasiin Maxamuud Xiir (Faratoon) ayaa caasimadda dalka Nayjeeriya kulan qarsoodi ah kula qaatay wasiirrada waxbarashada ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland. Lama oga waxyaabaha kulankaasi lagaga wada hadlay laakiin, sawirro la helay ayaa muujinayo masuuliyiintan oo wada sawirran. Wasiirrada ayaa ka qayb galay kulanka waxbarashada Afrika.
Wasiirka arrimaha dibada ee maamulka Somaliland Dr Sacad Cali Shire ayaa isna maanta sheegay in ay dhawaan Addis Ababa ku kulmeen wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen laba qodob oo kala ah dib u bilaabista wada hadallada Somaliland iyo Soomaalia iyo soo afjarida colaadda Somaliland iyo Soomaalia ku dhex maraysa aagga Tukaraq.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hore khadka telefoonka ugula xidhiidhay dhiggiisa Somalia Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waxaanay ka wada hadleen arrimaha ammaanka ee ka soo kordhay Tukaraq. Madaxweyne Muuse ayaa loo arkayay nin ku ad-adag qaddiyadda Somaliland, islamarkaana ku adkaan doona Somalia laakiin, kulamadan degdegga ah ee wasiirradiisu la yeesheen dhiggooda Soomaalia ayay bulshadu su’aalo iska waydiinaysa.
Madaxweyne Muuse iyo xisbigiisa Kulmiye ayaa si weyn xisbiga Waddani ugu eedeeyay in uu dalka u wado Xamar, islamarkaana si weyn bulshada ugaga digay in aan la dooran arrintaasi oo saamayn siyaasadeed ku yeelatay taageerada xisbiga ee bulshada laakiin, xidhiidhkan dhaw ee dhexmaray xukumadda Kulmiye iyo Somalia ayaa u muuqda mid hadallada hore ahaayeen kaalin ka cidhiidhsasho.
Sidoo kale dadka shacabka ah ayaa loo xidha tagitaanka Xamar. Arrintan oo soo noqnoqatay ayaa hadda la soo jeedinaya in sharci laga soo saaro waxaana hadda jira dhalinyaro u xidhxidhan tagitaanka Xamar oo lagu eedeeyay Qaran dumisnimo ama fikradda Soomaaliweyn.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/02/Qarsoodi.jpg 414 552 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-02-01 23:33:092018-02-01 23:33:09Kulamo caadi ah Qarsoodina lagu sheegey Oo Dhexmaray Wasiirro maamulka Somaliland Iyo dalka Soomaalia ah.
Midabkii Maariinka ee u gaarka ahaa Gabdhaha Soomaaliyeed oo cadaw ku duula... Warbixin Xiiso Leh-Aqoonyahan Abdiraxmaan Abdilaahi Ismaaciil oo Hambalyo Iyo...